Zinedine Zidane oo markale soo jeediyay dareenka kooxda Juventus… (Jawaabtii uu bixiyay markii la weydiiyay shaqada Bianconeri…) – Gool FM
Zinedine Zidane oo markale soo jeediyay dareenka kooxda Juventus… (Jawaabtii uu bixiyay markii la weydiiyay shaqada Bianconeri…)
(Madrid) 07 Abril 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka jawaabay wararka la xiriirinaya qabashada xilka macalinnimo ee kooxda Juventus.
Naadiga horyaalka Serie A ciyaarta ayaa lagu soo warramayaa inay markale isku dayayso inay Zidane kooxdeeda kusoo celiso isagoo tababare ah, inkastoo uu qayb ka mid ah waayihiisa ciyaareed uu kusoo qaatay magaalada Turin.
Si kastaba ha ahaatee, macallinka Faransiiska ah ayaa la weydiiyay suuro galnimada uu ugu laaban karo Juve, waxaana jawaabihiisa laga dheehan karay inay macquul tahay inuu soo dhoweeyo yabooha kaga imaanaya kooxdiisii hore.
Warsidaha Taliyaaniga kasoo baxa ee Sky Italia ayaa wicitaan muuqaal ah isugu keennay Zidane iyo halyeyga Juventus ee Alessandro Del Piero, waxaana tababaraha Los Blancos la weydiiyay inuu u xiisay nolosha Taliyaaniga iyo mustaqbalka inuu noqdo macallinka Bianconeri.
“Labadaba, Italy qalbigeyga ayay dhex taallaa, shan sano ayaan kusoo qaatay Turin, walina Juventus muhiim ayay ii tahay” ayuu u sheegay Sky Italia.
“Mustaqbalka Juve? Hadda, halkan ayaan joogaa, waan arki doonnaa” ayuu yiri Zidane.
Mustaqbalka Zinedine Zidane ee Real Madrid ayaa ah mid aan wali kala caddeyn, waxaanna xusid mudan in Juventus ay dooneyso inay kabtankii hore ee France isagoo macallin ah kusoo celiso Serie A.